तेज दिमाग भएको सन्तान चाहानुहुन्छ ? गर्भवती महिलाले आफ्नो खानामा यी खाना समावेश गर्नुहोस् ! - समृद्ध नेपाल
दाल– दालमा पनि भरिपूर्ण मात्रामा प्रोटिन हुन्छ । गर्भावस्थामा दालमा घिउ हालेर खाने सल्लाह दिइने गरिन्छ । गर्भावस्थामा दाल खानु निकै जरुरी हुन्छ । दाल आइरनको पनि राम्रो स्रोत हो ।दही– दहीमा पनि उल्लेख्य प्रोटिन हुन्छ जसको कारण गर्भावस्थाको समयमा दहीलाई खानामा राखिनु जरुरी हुन्छ । यससँगै भ्रूणको दिमागको विकासमा सहयोग मिल्नेछ ।
सार्वजनिक यातायात अब चप्पल लगाएर चलाउन नपाइने !
“मानिस आफ्नो कर्मद्वारा महान हुन्छ, जन्मद्वारा होइन” पढ्नुस् विश्व विख्यात दार्शनिकका उत्कृष्ट भनाईहरु !
रोहिंग्यालाई काभ्रे बाट हट्न हप्ता दिनको म्याद !
रवी लामिछानेले सिधाकुरा विवादबारे बल्ल मुख खोले, म नबोली यो लडाई जित्न चाहन्छु !
नागरिकता विधेयकविरूद्ध आन्दोलन, सरकारद्वारा कर्फ्यू जारी !
विवाहकै रात यस्तो घटना भएपछि राखी सावन्तलाई होटलमै छोडेर हिँडेका थिए !
१२ वर्षमै आमा बनिन् गंगामाया !
भारतबाट भ्याक्सिन चीनबाट अघोषित नाकाबन्दी !
देशलाई उज्यालो बनाएका कुलमानले अब मान्छेलाइ पनि उज्यालोको लागि आँखा दान गर्ने !
रत्नपार्कमा मेरो शरिरको मोलतोल शुरु भयो तपाई पनि सजिलै भेट्न सक्नु हुन्छ !
दुर्घटनाबाट देशभर शोक एक दशकयताकै भयानक दुर्घटना !
होन्डा हाइनेस सीबी ३५० को खुल्यो नेपालमा बुकिङ, बुकिङ गर्दा ५० हजार छुट !
कमेन्टमा Hello लेखेर भित्र गएर भिडियो हेर्नु होला !